Afovoany Atsinanana: Rehefa avy ny orana ! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2018 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
(Marihina fa tamin'ny 20 Novambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Avy ny orana tany Afovoany Atsinanana ary nandray ny kitendriny mba hanehoan'izy ireo ny fiovan'ny toetr'andro ireo bilaogera.
Hanombohantsika azy ny bilaogy miaraka amin'ny Stilettos in the Sand [Kiraro maranitra voditongotra any anaty fasika], avy any Arabia Saodita, izay nanoratra hoe:
Ho avy ny oram-be. Efa nahitana rotsak'orana betsaka tany amin'ny faritra hafa tany amin'ny “boatin'ny fasika” (solon'anarana nomena ny fanjakana Saodiana), kanefa zara raha nisy orana teto aminay. Tsara ny orana. Miandry izany fatratra izahay, ary faly rehefa tonga izany. Manadio ny zava-drehetra ny orana ary mahatonga ny hazo ho maitso sy mamiratra- tena tsara tarehy noho ireo hazo volotany sy ny volondavenona izay efa mahazatra antsika loatra- ary mametra ny vovoka izy. Raha mandrahona ny andro androany ka ho avy ihany ny
Ny fiatoantsika faharoa dia any Libya izay nandraisan'i Khadija Teri tsara ny orana ihany koa. Hoy izy nanamarika:
Tonga ihany ny fotoanan'ny orana, niaraka tamin'ny tselatra sy ny kotrotra. Mangatsiatsiaka kokoa ny toetrandro ary afaka ny vovoka. Ho hitantsika eo ny famitahan'ny lalana androany. Amin'ny ankapobeny, miteraka tondra-drano ny oram-batravatra voalohany satria tsentsin'ny fasika sy ny fako ny fantsona fivoahan'ny rano manerana ny làlana. Na izany aza anefa, tsy misy olona ho tonga ara-potoana amin'ny toetr'andro tahaka izao.
Rehefa miresaka momba ny làlana mamitaka dia faly i Seabee, avy ao Dubai, Emira Arabo Mitambatra satria tompon'andraikitra tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ity taona ity (2008) ny mpamily fa tsy ny orana.
Ity misy sary iray nalain'i Seabee izay mampiseho ny rahona mainty niandrona teny amin'ny lanitr'i Dubai:
Raha vao latsaka ny orana voalohany dia nilaza i Seabee fa ny orana no ho lazaina ho tompon'andraikitra:
Tena maizina be io maraina io rehefa nifoha aho. Nijery tany ivelany aho ary nahita rahona mainty sy tany mando.
Tonga ny vanim-potoanan'ny orana voalohany tamin'ity taona ity.
Koa indro ny vinavina.
Ny gazety rahampitso dia hiresaka momba ny korontana teny an-dàlana, anisan'izany ny lozam-pifamoivoizana maro.
Ny orana no nahatonga izany.
Afaka madiodio ny mpamily. Tsy noho ny fandehanana mafy noho ny toetr'andro akory no nahatonga izany.
Fa noho ny fahadisoan'ny orana.
Nahitana ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa tany Koety ary nitatitra i intlxpatr fa namirifiry ny maraina. Namoaka ity sarin'ny rahona matevina ity izy an-tserasera izay manambara ny fihavian'ny orana ity :
Avy any Israely, nanambara ny toetr'andro tsara kokoa ihany koa i Dr Savta.
Tena tsara ny andro tato ho ato. Na dia ireo roa andro avy orana ihany koa aza dia tsara . Efa lasa ny hafanan'ny fahavaratra ary mbola mafana ihany ny mivoaka na tsy misy akanjoba aza. Raha mba toy izany hatrany mandritra ny taona!
Saingy ho an'ilay reny Israeliana iray, A Soldier's Mother [Renin'ny miaramila iray], mahatonga fihetseham-po hafa ny orana . Hoy izy nanoratra:
Ankehitriny, ny orana midika fa kotsa i Elie sy ireo miaramila, amin'ny ririnina, mety hangatsiaka izy ireo, amin'ny fahavaratra, mety hafana izy ireo ary mety tsy hahazo aina. Tiako foana ny kotroka sy ny tselatra hatramin'izay, lehibe amiko ny herin'ny tafiodrivotra. Saingy ny tontolon'ny rivotra sy ny orana dia tsy dia mahafinaritra loatra raha manan-janaka any ivelany ianao.